Radmin Software လိုချင်ပါတယ် - MYSTERY ZILLION
Radmin Software လိုချင်ပါတယ်
July 2009 edited May 2010 in Web Base
Radmin Software လိုချင်ပါတယ် ရှိတဲ့သူ ကျေးဇူးပြုပြီးေ၀ငှပေးပါလား
ဗားရှင်း3ရမယ်အစဉ်ပြေလားဗျာ... ပြီးတော့ ဘယ်လိုနေရာတွေမျာသုံးတာလဲ ဘာ့အတွက်သုံးတာလဲ.... ဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲ တစ်ချက်လောက် ရှင်းပြပေးပါလားဗျာ စိတ်ဝင်စားလို့ပါ.... ဗားရှင်း3အစ၊ဉ်ပြေရင်ပြန်ပြောနော်ဆွဲပြီးပြန်တင်ပေးမယ်... :6::6::6:
Radmin က VNC software တစ်မျိုးပါပဲ .. network အတွင်းက စက်တွေဘာလုပ်လည်းဆိုတာကို ကြည့်တာပါ ...
radmin က vnc software တစ်မျိုးပါပဲ .. Network အတွင်းက စက်တွေဘာလုပ်လည်းဆိုတာကို ကြည့်တာပါ ... :d
ဂလိုလား.... :d:d:d ရုံးကချက်မမတွေတတိထား.... ငရတို့ တတိယမျက်လုံးရပီ... ဟီ.... ဖွမယ်.... :d:d:d
နေဦးလေ ကိုရသာရဲ ့.. ရရင် ကျွန်တော့်ကိုလည်းပေးဦး ဟိဟိ..
အနော်လည်း ဖွချင်သပါ့... :d
ကျနော်တော့ network lookout administrator ဆိုတာလေးသုံးတယ်ဗျ။ ကောင်းတယ်။ client တွေဘာလုပ်နေလဲ၊ Error တတ်နေလား၊ ဘာ error လည်း၊ သုံးတာစွဲတာ ဘောင်ကျော်နေဘီလား၊ စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးကြည့်လို့ရတဲ့အပြင် သူလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို ၀ိုင်းကူတာမျိုးတွေအထိတောင်ရပါတယ်။ record လုပ်ထားလို့လဲ ရတယ်။ အဲဒါမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာ ခံလိုက်ရတာ။ ပြန်မပြောချင်ပါ၀ူး။ cyber cafe တွေမှာတော့ မသုံးသင့်ဘူးလားလို့ထင်ပါတယ်။ user တွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ပြောရရင် လူ့ အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်စော်ကားနေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ အဲ ရုံးတွေ၊ အလုပ်တွေမှာ လုံခြုံရေးဆိုတဲ့ Reason နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ user များရဲ့ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကို လေးစားသောအားဖြင့် ကြိုတင်သတိပေးထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် မည်ကဲ့သို့သော နည်းနှင့်မျှ မပေါက်ကြားစေဖို့ အထူး (အထူး) ဂရုစိုက်ရမယ်လို့ ယူဆပါကြောင်း။
လူ့အခွင့်အရေးများကို အလွဲသုံးစားပြုမူနေသော Cyber အချို့ကို ရည်ညွန်းလျှက်
ကျွန်တော်လဲလိုခြင်တယ် အေ software လေ
client ကနေရော server ကိုပြန်ဖောက်လို့ရမယ့် နည်းစနစ်(Software) လေးများရှိဘူးလား..... ရှိရင် share ပေးကြဘာဦးဗျာ..... တင်ပေးဖို့ မသင့်ရင်လဲ Mail ကို ပြောပေးကြပါနော်.......
Remote Administrator(Radmin)3.0 Full Version
Security ပိုင်းကို သင်ယူတော့မယ်။
Public ကနေဘဲ Internet သုံးတော့မည်။
password များကို စာအုပ်ထဲသို့ပြောင်းတော့မည်။
password copy/paste ကို လေ့ကျင့်တော့မည်။
Virus လို့ ပြောနေလို့ပါ .. ပြန်စစ်ပေးပါဦး အစ်ကိုရေ
Server မှာပဲ run တာလားဗျ .. Client က run တာရော မရှိဘူးလား .. ရှိရင်လိုချင်လို့ .. :)
server မှာပဲ run တာလားဗျ .. Client က run တာရော မရှိဘူးလား .. ရှိရင်လိုချင်လို့ .. :d:)
ရှိပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်တင်တာ ဘယ်ဆာဗာကမှ လက်မခံဘူးဗျ။ အဲ ရက်ပစ်ကတော့ ရတယ်။
ရရင် ရှယ်ဦးနော် အနော်လိုချင်လို့ပါ rapid နဲ့ပဲပေါ့ .. ကိုပရင့်နော် .. :5::5::5:
ကျွန်တော်လိုချင်တာက client အတွက်လိုချင်ပါတယ်။ client ကနေ ကလိလို့ရတာမျိုးပေါ့ ဘာVersion ဖြစ်ဖြစ်လိုချင်ပါတယ်
ဒေါင်းကြည့်တာ တစ်နေရာမှာ ဆာဗာတင် ပြီး တစ်နေရာမှာကလိုင်းရင့် တင်ပြီးမှရမှာပါ.... ကလိုင်းရင်တစ်ခုထဲတင်ရင်မရလောက်ဘူးထင်ပါတယ် အစ်ကိုရေ.... :d:d:d
အစ်ကိုတို့ရေ ဒီ software လေး ပြန်ရှဲလ်ပေးပါလား...လိုချင်လို့ပါ....